किन सहज छैन एमआरआई सेवा ? के हो एमआरआई ? – epashchim khabar
· July 10, 2019 ·1 min read·0
काठमाडौं, असार । सिटी स्क्यानबाट पत्ता नलागेको वा द्विविधामा परेको रोग पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने म्याग्नेटिक रिसोन्सेस इमाजिङ (एमआरआई)को प्रयोग बढ्दो छ । उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा एमआरआईको प्रयोग हुने गरेको छ तर सर्वसाधारणका लागि एमआरआई सहजै र सुलभ मूल्यमा पाउन कठिन छ ।
एमआरआई उच्चस्तरको प्रविधि हो । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेडियोलोजिस्ट डा.डीबी कार्कीका अनुसार चुम्बकीय शक्तिबाट चल्ने अति नै उच्चस्तरको प्रविधिलाई एमआरआई भनिन्छ । यसले स्नायु, मेरुदण्ड, हाडजोर्नी, टाउको, शरीरका विभिन्न नसाको अवस्था पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ । त्यसले सही रूपमा रोग पत्ता लगाई उपचार गर्न सजिलो हुन्छ । ढाड वा कम्मर दुख्ने, घुँडाका रोगी, हाडमा लागेको सङ्क्रमण वा ट्युमरको विशेष जानकारी लिन पनि एमआरआई गर्ने गरिन्छ । मस्तिष्क र मेरुदण्डको ट्युमरको परीक्षण र उपचारका लागि पनि एमआरआई गर्ने गरिन्छ । डा. कार्कीले एमआरआईले नरम तन्तुलाई स्पष्टसँग देखाउने जानकारी दिए ।
सरकारी अस्पतालमा समेत एमआरआई सुलभ छैन । अस्पतालका अनुसार सातदेखि नौ हजार रुपियाँ शुल्क लाग्छ । निजी क्षेत्रमा एमआरआई झनै बढी महँगो हुने गर्छ । सरकारी अस्पतालमा घर भाडा नपर्ने, चिकित्सक सरकारअन्तर्गत हुने भएकाले थप भत्ता दिइरहनु नपर्ने, मेसिन पनि सरकारले नै खरिद गर्ने हुनाले सरकारीमा केही सस्तो पर्र्ने भए पनि रकम सानो भने होइन । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।